ဂပြနျနိုငျငံမှ ထူးခွားဆနျးပွားသညျ့ ကစားနညျး (၁၀) မြိုး။ – SoShwe
Home/Entertainment/ဂပြနျနိုငျငံမှ ထူးခွားဆနျးပွားသညျ့ ကစားနညျး (၁၀) မြိုး။
ဂပြနျနိုငျငံမှ ထူးခွားဆနျးပွားသညျ့ ကစားနညျး (၁၀) မြိုး။
So Shwe May 28, 2020	Entertainment, Funny Leaveacomment
ဂပြနျနိုငျငံရဲ့ သိပ်ပံနဲ့နညျးပညာပိုငျးဆိုငျရာကို လိုကျမှီနိုငျသညျ့ နိုငျငံမရှိသေးဘူးဟုတောငျဆိုရမှာဖွဈသလို အပွာကားယဉျကြေးမှုထှနျးကားခွငျးကိုလညျး မညျသညျ့နိုငျငံမြှယှဉျနိုငျခွငျးမရှိသေးပါဘူး။ လကျရှိအခြိနျ၌မူ အရှယျရောကျပွီးသား အမြိုးသား၊ အမြိုးသမီးမြားအတှကျ ဖနျတီးထားသညျ့ ဂပြနျနိုငျငံရဲ့ ဂိမျး (၁၀) မြိုးကို Soshwe ပရိသတျကွီးအတှကျ ဖျောပွပေးလိုကျရပါတယျ။
၁။ Collect the Coins
ယခုဂိမျး၌ပါဝငျကစားမညျ့အမြိုးသမီးမြားက အကွှစေမြေ့ားကို သူတို့ရဲ့ရငျသားမြားဖွငျ့ ညှပျယူရခွငျးဖွဈပွီး အကွှစေအေ့မြားဆုံးစုဆောငျးနိုငျသူက အနိုငျရရှိသညျ့ဂိမျးဖွဈပါတယျ။
၂။ Diaper – Man
Diaper တဈခုတညျးသာ ဝတျဆငျထားသညျ့ အမြိုးသားမြားက ခြောမှသေ့ညျ့မကျြနှာပွငျကို ကွိုးစား၍တကျပွီး ဝတျလဈစလဈအမြိုးသမီးကို ဖုံးကှယျထားသညျ့ မကျြနှာသုတျပုဝါကို ဖယျရှားရသညျ့ဂိမျးပါ။
၃။ Pain is gain
အနာခံမှအသာစံရဆိုသညျ့ စကားပုံနဲ့ကိုကျညီသညျ့ ဂိမျးတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။ အမြိုးသမီးရဲ့ Bra ကို ခြိတျမြားဖွငျ့ ခညျြနှောငျထားပွီး ဂိမျးကစားသူကလညျး သူ့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးကို ခြိတျမြားဖွငျ့ညှပျထားပွီး အမြိုးသမီးရဲ့ Bra ကို ဖယျရှားရသညျ့ဂိမျးဖွဈပါတယျ။
၄။ A Guy to Guy
အမြိုးသားနှဈဦးပါဝငျသညျ့ဂိမျးဖွဈပွီး တဈယောကျက ကနျြတဈယောကျကို ပါးစပျဖွငျ့ လိငျအာသာဖွပေေးသညျ့ ဂိမျးဖွဈပါတယျ။ ဂိမျးရဲ့စညျးမဉျြးအရ အာသာအဖွခေံနရေသညျ့အမြိုးသားက လိငျကိစ်စပွီးမွောကျသှားပါက ရှုံးနိမျ့မညျဖွဈပါတယျ။
၅။ Spread Your Legs!
ယခုဂိမျး၌ မိနျးကလေးမြားက ခွထေောကျကို တတျနိုငျသမြှ ကယျြကယျြကားနိုငျရနျလိုအပျပွီး ခွထေောကျအကယျြဆုံးကားနိုငျသညျ့ အမြိုးသမီးက အနိုငျရရှိပါတယျ။
ဒီဂိမျး၌ ပါဝငျကစားသညျ့ မိနျးကလေးအနနေဲ့ အဝတျအစားမပါသညျ့ သူမရဲ့ခန်ဓာကိုယျအပျေါပိုငျးကို လကျဖွငျ့ကာကှယျရငျး ကခုနျရမှာဖွဈပွီး တဈခြိနျတညျး၌ပငျ သူမရဲ့အောကျခံဘောငျးဘီကိုလညျး မကြှတျကသြှားအောငျ ကခုနျရသညျ့ ဂိမျးဖွဈပါတယျ။
၇။ Blowjob the Pipe!
မိနျးကလေးနှဈယောကျက ပိုကျကိုပါးစပျဖွငျ့ အာသာဖွပေေးသညျ့ပုံစံလုပျပွရသညျ့ဂိမျးဖွဈပွီး ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပါက ပိုးဟပျကိုစားပွရမညျဟူသော စညျးကမျးကိုလညျး သတျမှတျထားပါတယျ။
၈။ Human Slide
ရကေူးဝတျစုံသာဝတျဆငျထားသညျ့ အမြိုးသမီးမြားအပျေါမှ သကျကွီးပိုငျးအမြိုးသားမြားက ဝမျးလြားထိုးသှားပွရသညျ့ ဂိမျးဖွဈပါတယျ။
၉။ The Distraction
အမြိုးသားနဲ့ အမြိုးသမီးနှဈဦးပါဝငျသညျ့ဂိမျးဖွဈပွီး အမြိုးသမီးက သူမရဲ့လကျဖွငျ့ အမြိုးသားရဲ့လိငျအင်ျဂါကို အာသာဖွပေေးနစေဉျ အမြိုးသားက သီခငျြးကို ဟနျမပကျြသီဆိုပွရသညျ့ဂိမျးဖွဈပါတယျ။
၁၀။ Undress The Girl!
အဖှဲ့လိုကျကစားရသညျ့ဂိမျးဖွဈပွီး အဆိုပါအမြိုးသားအဖှဲ့က မိနျးကလေးရဲ့ သိုးမှေးဝတျစုံနဲ့ ခြိတျဆကျထားသညျ့ ပလကျဖောငျးကိုလှညျ့ပွီး အဆိုပါအမြိုးသမီးရဲ့ဝတျစုံကို ကြှတျကသြှားအောငျ ကွိုးစားရသညျ့ဂိမျးဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါဂိမျးကိုပါဝငျယှဉျပွိုငျသညျ့ အဖှဲ့အနဖွေငျ့လညျး စပရေးမြား၊ သုတျဆေးအဖွူရောငျမြား၊ ဘောလုံးမြားဖွငျ့လညျး တိုကျခိုကျခံရပါသေးတယျ။
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ထူးခြားဆန်းပြားသည့် ကစားနည်း (၁၀) မျိုး။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကို လိုက်မှီနိုင်သည့် နိုင်ငံမရှိသေးဘူးဟုတောင်ဆိုရမှာဖြစ်သလို အပြာကားယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားခြင်းကိုလည်း မည်သည့်နိုင်ငံမျှယှဉ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ လက်ရှိအချိန်၌မူ အရွယ်ရောက်ပြီးသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများအတွက် ဖန်တီးထားသည့် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဂိမ်း (၁၀) မျိုးကို Soshwe ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
ယခုဂိမ်း၌ပါဝင်ကစားမည့်အမျိုးသမီးများက အကြွေစေ့များကို သူတို့ရဲ့ရင်သားများဖြင့် ညှပ်ယူရခြင်းဖြစ်ပြီး အကြွေစေ့အများဆုံးစုဆောင်းနိုင်သူက အနိုင်ရရှိသည့်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Diaper တစ်ခုတည်းသာ ဝတ်ဆင်ထားသည့် အမျိုးသားများက ချောမွေ့သည့်မျက်နှာပြင်ကို ကြိုးစား၍တက်ပြီး ဝတ်လစ်စလစ်အမျိုးသမီးကို ဖုံးကွယ်ထားသည့် မျက်နှာသုတ်ပုဝါကို ဖယ်ရှားရသည့်ဂိမ်းပါ။
အနာခံမှအသာစံရဆိုသည့် စကားပုံနဲ့ကိုက်ညီသည့် ဂိမ်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးရဲ့ Bra ကို ချိတ်များဖြင့် ချည်နှောင်ထားပြီး ဂိမ်းကစားသူကလည်း သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ချိတ်များဖြင့်ညှပ်ထားပြီး အမျိုးသမီးရဲ့ Bra ကို ဖယ်ရှားရသည့်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားနှစ်ဦးပါဝင်သည့်ဂိမ်းဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်က ကျန်တစ်ယောက်ကို ပါးစပ်ဖြင့် လိင်အာသာဖြေပေးသည့် ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းရဲ့စည်းမျဉ်းအရ အာသာအဖြေခံနေရသည့်အမျိုးသားက လိင်ကိစ္စပြီးမြောက်သွားပါက ရှုံးနိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဂိမ်း၌ မိန်းကလေးများက ခြေထောက်ကို တတ်နိုင်သမျှ ကျယ်ကျယ်ကားနိုင်ရန်လိုအပ်ပြီး ခြေထောက်အကျယ်ဆုံးကားနိုင်သည့် အမျိုးသမီးက အနိုင်ရရှိပါတယ်။
ဒီဂိမ်း၌ ပါဝင်ကစားသည့် မိန်းကလေးအနေနဲ့ အဝတ်အစားမပါသည့် သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို လက်ဖြင့်ကာကွယ်ရင်း ကခုန်ရမှာဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်း၌ပင် သူမရဲ့အောက်ခံဘောင်းဘီကိုလည်း မကျွတ်ကျသွားအောင် ကခုန်ရသည့် ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းကလေးနှစ်ယောက်က ပိုက်ကိုပါးစပ်ဖြင့် အာသာဖြေပေးသည့်ပုံစံလုပ်ပြရသည့်ဂိမ်းဖြစ်ပြီး ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါက ပိုးဟပ်ကိုစားပြရမည်ဟူသော စည်းကမ်းကိုလည်း သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ရေကူးဝတ်စုံသာဝတ်ဆင်ထားသည့် အမျိုးသမီးများအပေါ်မှ သက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားများက ဝမ်းလျားထိုးသွားပြရသည့် ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးပါဝင်သည့်ဂိမ်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးက သူမရဲ့လက်ဖြင့် အမျိုးသားရဲ့လိင်အင်္ဂါကို အာသာဖြေပေးနေစဉ် အမျိုးသားက သီချင်းကို ဟန်မပျက်သီဆိုပြရသည့်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အဖွဲ့လိုက်ကစားရသည့်ဂိမ်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါအမျိုးသားအဖွဲ့က မိန်းကလေးရဲ့ သိုးမွေးဝတ်စုံနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားသည့် ပလက်ဖောင်းကိုလှည့်ပြီး အဆိုပါအမျိုးသမီးရဲ့ဝတ်စုံကို ကျွတ်ကျသွားအောင် ကြိုးစားရသည့်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဂိမ်းကိုပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သည့် အဖွဲ့အနေဖြင့်လည်း စပရေးများ၊ သုတ်ဆေးအဖြူရောင်များ၊ ဘောလုံးများဖြင့်လည်း တိုက်ခိုက်ခံရပါသေးတယ်။
Previous လျိုငျလီတိုကျစဈမှူးတဈဦးကို လီဗာပူး၊ ရီးရဲယျမကျဒရဈတို့နဲ့အပွိုငျကွိုးစားမညျ့ ယူနိုကျတကျ။